Amahlaya Okuqala Wokuhlangana Kwamazwe Omhlaba waseGranada Izincwadi Zamanje
Ngihlangana Namazwe Amahlaya eGranada
Izindaba Zamahlaya | | Amahlaya, Imicimbi
Futhi okunye umcimbi ngaphezulu, kulokhu kuhlobene ne- amahlaya wokuqhafaza, ngoba imayelana ne- uhlelo lokuqala lomhlangano womhlaba wonke wosomahlaya (futhi angisho ukuthi iChiquito de la Calzada), egujwa kusuka Okthoba 26-28 en I-Granada.
"IGranada Enamahlaya" ufuna ukuba ngumhlangano waminyaka yonke ovulekele ukubamba iqhaza kosomahlaya nabaqopha imidwebo abavela kuwo wonke umhlaba, okuhloswe ngawo ukuxhumanisa idolobha laseGranada namahlaya nokudweba.
Ngokwesakhiwo salo mhlangano, umbukiso uzohlelwa "IGranada iyasimangaza", kanye nekhathalogi izoshicilelwa ngokukhethwa kwemisebenzi etholakele. Inhloso ngukuthi lo mbukiso - oxhaswe nguMnyango Wezokuvakasha woMkhandlu Wedolobha laseGranada - uhambele indawo, ubambe iqhaza kuleyo micimbi ephathelene nezokuvakasha kanye nokwenyuswa kwamazwe omhlaba kwedolobha laseGranada eSpain nakwamanye amazwe.
1- Ikholi livulekele abadwebi bamakhathuni abangochwepheshe nabasafufusa nabadwebi bamakhathuni abavela kuwo wonke umhlaba.
2Isihloko soMhlangano Wokuqala sithi "IGranada" (Idolobha laseGranada, i-Alhambra, i-Eight Wonder, Idolobha elineqhwa nolwandle, iNyuvesi nedolobha labafundi, idolobha leMulticultural, iGranada nezikhumbuzo zalo, njll). Imininingwane engaphezulu kule webhusayithi yoMnyango Wezokuvakasha www.zphonline.com
3Ababambiqhaza bangaletha ubuningi bemisebenzi emi-3. Usayizi we-A4 landscape (297 mm ububanzi x 210 mm ukuphakama) noma ngokulingana. Kuphela amakhathuni nemifanekiso yemvelo ehlekisayo ehlobene nengqikithi yoMhlangano ezokwamukelwa, engenziwa kusetshenziswa noma iyiphi inqubo.
Yize kunconywa ukuthumela ama-vignette athule, imibhalo yanoma yiluphi ulimi izokwamukelwa inqobo nje uma ukuhunyushwa kwayo kuyiswa eSpanishi noma esiNgisini.
4.- Imisebenzi kufanele ithunyelwe ku-300 dpi, ngefomethi ye-JPG, nge-imeyili ku
5Ukuthunyelwa kufanele kuhambisane nefomu elihlanganisa imininingwane elandelayo:
Igama nezibongo zombhali
Igama osayina ngalo izinhlamvu
Ikheli lokuposa eligcwele
Ikheli le-imeyili kanye nocingo.
Ikharikhulamu emfushane lapho kuboniswa khona ukushicilelwa noma imidiya lapho uvame ukusebenza khona.
Isithombe noma i-caricature yombhali (uma uthanda)
6Ngokukhethwa kwemisebenzi etholakele, ngaphakathi kohlaka loMhlangano Wokuqala, umbukiso oshiwo ngenhla uzobanjelwa eRey Chico Municipal Art Centre for People People.
Ngokunjalo, umbukiso ungakhonjiswa ngokujikeleza kweminye imicimbi kazwelonke noma yamazwe omhlaba noma imicimbi ephathelene nezokuvakasha lapho uMkhandlu Wedolobha laseGranada ubamba iqhaza khona.
Zizophinde zikhonjiswe kwi-Intanethi kukheli lewebhu elizomenyezelwa ngokuhamba kwesikhathi.
7Ngemisebenzi eqoqiwe, kuzokwenziwa ikhathalogi yokuhlanganisa. Bonke ababhali umsebenzi wabo ofakiwe kukhathalogi bazothola ikhophi yawo.
8Inhlangano izothintana, ngokusebenzisa iwebhusayithi yoMhlangano, noma nge-imeyili, uhlu lwabahlanganyeli nomsebenzi owutholile kanye nohlu lwalabo abakhethelwe umbukiso kanye nekhathalogi.
Ngokunjalo, ngewebhusayithi yoMhlangano, ababhali bazokwaziswa ngezindawo lapho imisebenzi yabo ingakhonjiswa khona.
9Umnqamulajuqu wokwamukelwa kwemisebenzi uphela ngoSepthemba 9, 2007.
10Ukuthumela lo msebenzi kusho ukuthi umbhali ugunyaza uMkhandlu Wedolobha laseGranada ukuba uwukhiqize futhi uwusakaze, inqobo nje uma igama labo lizovela futhi inhloso ukusabalalisa lo Mbukiso kanye neminye imisebenzi yokuhlangana emkhakheni wamahlaya. Graphic and / noma ngocingo (uhlelo lwamakhathalogi, amaphosta, izincwajana, ukusakazwa emaphephandabeni, ekhasini leWebhu, njll.), ngaphandle kwalokho kudalwe isibopho sanoma yiluphi uhlobo ngaphambi kombhali.
11Ukubamba iqhaza kule kholi eya eMhlanganweni i kusho ukwamukelwa ngokugcwele kwalezi zisekelo. Noma ikuphi ukungabaza okungavela kuzoxazululwa yinhlangano yoMhlangano.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Ngihlangana Namazwe Amahlaya eGranada
I-Hellboy 2 teaser futhi ngiyincoma ngendlela
Imithetho Yomncintiswano weCosplay